တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ခဏတဖြုတ် အတွေး
Posted by မေဓာဝီ at 10:07 AM
ဒီကနေ့ ခေတ်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ထားတဲ့ ပို့ (စ)ကလေး..တင်ပြပုံကောင်းပါတယ်… ကျွန်တော့်စွမ်းအင်ဆောင်းပါးတွေမှာ ဇစ်မြစ်လိုက်ထားတာ အဲဒါတွေ က အမြန် ဖြေရှင်းလို့ ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ် ဆိုတာအထောက်အထားလေးတွေနဲ့ တင်ပြခဲ့တာပါ…ဟိုဘက်ခြံကမီးထိန်ထိန် ဆိုသလို ယိုးဒယားကိုရောင်းနေတဲ့စွမ်းအင်တွေက မြန်မာပြည်လက်ရှိပေးနေတဲ့ဟာရဲ့သုံးဆမကထုတ်လို့ ရရက်နဲ့ နော်…အေးဗျာ..ဒီလိုတရားသဘောနဲ့ ဖြေတွေးတွေးတော့လဲကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာပေါ့…ကောင်းပါတယ်…
8/15/2007 11:29 AM
မြင်းလှည်းတို့ လန်ချားတို့ ပြန်ပြေးရင် ဘယ်လိုနေမလဲ. မမေ.. ထိုင်စီးလိုက်ရင် ခန့်ခန့်ကြီး နေမှာ.. ဟဲ
8/15/2007 5:17 PM
thanksalot and keep writing about the social news I love to hear it.
ကျပ်ချက်ကတော့ ရင်တောင်ကျပ်ချင်သလိုလိုဖြစ်လာလို့၊ အသက်ရှူတောင်မ၀ချင်တော့ဘူး။ ကိုင်းဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ???????????
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ ... ၁၉၈၇ စက်တင်ဘာ ၅ ရက် ... အဆုံးမရှိတောက်လောင်မည့် မီးတို့ကို စတင်စွဲလောင်စေခဲ့တဲ့နေ့ ... အခုလဲလာပြန်ပြီ ... အပူတွေ၊ ပွတ်တိုက်ခြင်းတွေ၊ ဘယ်တော့ မီးပွားတွေထွက်လို့ မီးစွဲလောင်မယ်မသိ ...
8/16/2007 2:48 AM
Let me correct something, actually, potato contains much Carbohydrate, NOT cholesterol.
You can check in the following link
ကြက်ဥတစ်လုံး ၁၃၀ ဆိုတော့ ... ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက် မှာတောင် မြန်မာပြည်ထက် ဈေးနည်းနည်း သက်သာ နေသလားလို့ ..
ကုန်ဈေးနှုန်းများ သိရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
8/17/2007 4:34 AM
8/17/2007 12:15 PM